Richard Branson, izingcaphuno okuyinto ungafunda ngezansi, wazalwa ngo-1950 eningizimu yeLondon, emkhayeni wabantu aristocrats. Umama womfana, Yvette Flint, kwaba owesifazane egqamile futhi abanamandla ngaphambi kokuba ashade uye wakwazi ukuba abe isisebenzi sasendizeni ngaphandle imfundo. Okwesikhathi esithile wayeze wazishaya umshayeli, egqoke ifomu womuntu. umsebenzi waphela masinyane ngemva komshado.
Umyeni Edward Branson kwadingeka umlingisi obuhlukile futhi wahola indlela ezolile futhi kulinganiswa zokuphila. Lokhu wabekela indodana yakhe. Ngaphandle kwalokho, u-Edward kwaba isifo ezingavamile - dyslexia, okuyinto wamvimbela ukuba ukusebenza, okwaholela izinkinga zezimali.
Richard Branson ithole lesi sifo njengefa. Lo mfana kwaba kuphula umthetho we nokudidiyela ukunyakaza, njalo babenezinkinga eKufundza neKubhala. uhlamvu nginenhliziyo UYvette waba nendima ebaluleke kakhulu bekhulisa indodana yakhe. Yena njalo ukuhlola isudi yakhe ukuba URichard ukuzivumelanisa nobunzima. Uma kungenjalo umama, yena ayeyohlala umfana ampofu ngaphandle ikusasa eliqhakazile. Kodwa UYvette afundise indodana yakhe ukuba ungalokothi uphonse ithawula, futhi ngokushesha ukugula kwakhe ahlehla.
ibhizinisi lakhe lokuqala, Richard Branson ihlelwe iminyaka engu-15. Kwakuwusuku magazini "Student", lapho abantu abasha bangajabulela baveze umbono wabo ngokumelene YaseVietnam. Kodwa naphezu izinkontileka komama kanye nokukhangisa, ngemva kweminyaka embalwa, lolu hlobo yavalwa. Richard akuyona engqangqa, ngoba aye wasebenza kakade elinye ibhizinisi - isikhungo intsha. izivakashi akhe angamalangabi abantu ngezinkinga ezahlukene: ngephutha abe abesifazane abakhulelwe, yezidakamizwa notshwala, nabantu abathandana bengabobulili obufanayo. Inombolo yomhlaba wonke yesikhungo isebenza ngempumelelo kuze kube namuhla.
ibhizinisi Landelayo okuyinto matasa Richard Branson - ukuthengisa amarekhodi. Ekuqaleni, wazithumela ngeposi, kodwa ke wavula esitolo Oxford Street, wasinikeza igama ngezenzakalo ezishaqisayo: «Virgin» (ngesiNgisi "intombi nto."). igama okunjalo wakhethwa ngenhloso. Yayimelela nalwazi futhi ukungawazi usomabhizinisi kwezokuzijabulisa. Nokho, yokungabi nokuhlangenwe nakho akazange akuvimbele ukukhandwa «Virgin» futhi safinyelela entsha ukuchuma ngokwezimali.
Isinyathelo esilandelayo usomabhizinisi - ". Izinkampani ntombi" ukunqoba izwe ngokusebenzisa inethiwekhi Kwaqale kwafika zokubukela amabhayisikobho. Khona-ke Richard balithanda cinema Uye waqikelela lithathelwe incwadi ka "1984" Orwell sika, inendima enkulu khona. Khona-ke baqala ukuvela "Amahhotela ntombi" inkampani Toy nomsakazo yezindiza.
Namuhla, "Virgin" - corporation ukuthi kuhlanganisa ezingaphansi ezine. Ngaphezu izindiza, liphinde isikhungo imfanelo, zokwelashwa, wesitimela zokuthutha, isiphuzo embonini, cable TV, i-Internet ukuhlinzeka nokuningi. Kodwa akugcini lapho. Maduze ukungezwa uhlu zokuhlonipha lokuqala lwezithunywa opharetha esikhaleni emhlabeni. Richard ufuna ukusebenzisa isikhala uhambo ukuthi abantu abavamile babekwazi zibabaza Umhlaba isikhala ngawawo.
Richard Branson, ogama biography iye yachazwa ezinhlwini ezingu lesi sihloko unesithakazelo emidlalweni eyingozi. Kulesi ensimini wasifinyelela ngokunqoba sina. Ngo-1986, lo somabhizinisi landizela e ibhaluni -Atlantic Ocean. Kwakuyisikhathi irekhodi lomhlaba. Futhi ngo-1991, ewela iPacific. Ngisho namanje abantu abaningi bakholelwa usomabhizinisi master best of yamabhanoyi.
Usomabhizinisi ukwenza ngokubhala. Brenson Richard, abathenge izincwadi ezivela emashalofini ngokushesha, amasheya izimfihlo abo okuphumelela, uhambo, ukunqoba, izinselele futhi izindlela uzinqobe. Umlando walo - hhayi nje isihloko wokwenama, kodwa futhi okuhle "ukukhahlela-motivators" kubo bonke abathanda imali lula.
I izingcaphuno best
1. "Ukuze udale ibhizinisi, udinga dolobha elincane kakhulu. '
Sesixoxile mayelana nebhizinisi ngowokuqala Branson sika. Ngakho, endabeni umagazini Akaphindanga imali. Ngelinye ilanga umama wakhe bathole umgexo, njenganoma iyiphi indoda ehloniphekile, amyisa amaphoyisa. Kuphela izitatimende yokulahlekelwa ngoba akekho sigcwalisiwe. UYvette wawudayisa umgexo futhi wanikeza Richard izikweletu ambalwa. Ngenxa yalokhu, i-Branson abasha bakhangwa abakhangisi ihlelwe ukushicilelwa umagazini.
2. "Ibhizinisi kuyinto umqondo ukwenza ngcono izimpilo zabanye."
Branson ukuthi njengoba nje nosomabhizinisi ukuthi kakhulu nesisusa. "Uma ngcono izimpilo zabantu, khona-ke bekwi ize."
3. "Ukuze zikhule, abe ngaphansi."
Richard Branson akazange ukwandisa ubungako ibhizinisi lakhe irekhodi. Kunalokho, livula izinkampani irekhodi 30. Usomabhizinisi akazange liqoke abaphathi abaphezulu ukuthi ilawule isibalo esikhulu abangaphansi, futhi weza isakhiwo esincane yenhlangano, eliholwa isethi abasebenzi abaphathi maphakathi. Umoya wokuncintisana phakathi iqembu egqoka kamnandi futhi enobungane.
Ngokwe-usomabhizinisi ukholelwa impumelelo isu lakhe ukuthi ngokuqinile ngamunye noma nini, ukwazi kahle lokho yena uphumelele futhi lapho ingozi ukwehluleka. Namuhla imali eyiphinda "Virgin" lidlule eziyizinkulungwane ezingu-20. $. Nokho isu esiyingqayizivele Richard ukhumbuza wonke umuntu ukuthi liphinde iqembu amafemu amancane.
Dyukov Aleksandr Valerevich: ochumayo futhi unobuntu eqinile
I-Mysteries of ubuthongo. Izixazululo for ukuqwasha
Magic ukhiye "qala-stop" okwenza izwe wezindlu!
Sandwich nge salmon
Ufuna ukwazi lapho ubisi amakhowe ezikhulayo?
Adenoids: ukuthi kuyini, izimpawu, ukwelashwa kanye nokususwa
Kungani ingane ngokuvamile evuka ebusuku
Uyini emgqeni electronic